Halkan Ka Akhriso Tirada Dadka Ku Dhintay Qarax Ka Dhacay Magaalada Manchester Ee Dalka Ingiriiska | Somaliland Post
Halkan Ka Akhriso Tirada Dadka Ku Dhintay Qarax Ka Dhacay Magaalada Manchester Ee Dalka Ingiriiska
Last UpdatedMay 23, 2017 | Published by: SLpost
(SL.Post) -Sagaal iyo toban qof ayaa ku dhimatay 50 kalana way ku dhaawacantay weerar la rumeysan yahay inuu ahaa mid aragagixiso oo ka dhacy saaxaada lagu qabato munaasabadaha heesha oo ku taalla magaalada Manchester ee dalka UK.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaq xooggan markii ay dhamaadeen heeso ay goobtaasi si toos ah uga qaadeysay Ariana Grande, oo ah fanaanad caan ah oo u dhalatay Mareykanka.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay inay maqleen qarax ka dhacay albaabka hore ee laga gala saaxadda.
Boosteejada tareenada Manchester Victoria oo u dhaw goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa la xiray, waxaana la baajiyay dhammaan safaradii tareenada ee qorsheysnaa.
Waxa sababay qaraxa lama garanayo, balse ra’iisal wasaaraha Britain, heresa May, ayaa sheegtay in falkani ula dhaqmayaan inuu yahay mid argagixisnimo.
Waxay hakisay ololeehdii doorashada guud waxayna maanta shir guddoomin doontaa kulan deg deg ah oo ay isugu imaan doonaan wasiiradeeda. Waxay ka arrinsan doonaan sida ay uga jawaab celin lahaayeen weerarkan.
May ayaa tiri: “Waxaan isku dayaynaa inaaan helno macluumaad dhameystiran oo ku aadan sida ay wax uga dhaceen Manchester.
Warar aan la xaqiijinin oo laga soo xigtay s mas’uuliyiin aan magacooda la asheegin oo Mareykan ah ayaa sheegaya in qof is qarxiyay uu weerarkaasi geystay.
Jahwareer ayaa jiray.
Mid ka mid ah dadkii halkaasi joogay ayaa sheegay in xooga qaraxa dartii uu ku dhacay meel dhawr mitir ujirta, markii uu soo kacayna uu indhaha saaray dad daadsan dhulka.
Waxaana goobta isku gedaamay ciidamada booliska iyo kooxaha gurmadka, iyadoo a xiray waddada marta halka uu qaraxa ka dhacay.
Nin ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay ayaa sharaxay sida qaraxa uu u dhacay, iyadoo taagerayaashii ay ka baxayeen halkii lgu qabanyay bandhig faneedka.
Majid Khan, oo 22 jir ah kuna sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay oo sharaxay sida ay wax u dhaceen ayaa waxa uu yiri ” qarax weyn oo ka argagixiyay qof walba ayaa ka dhacay halkaasi, qof walbana waxaa uu isku dayay inuu baxsado”
Majid waxaa kale oo uu yiri ”wuxuu ahaa hal qarax oo qof walba oo joogay dhinaca kale ee laga maqlay qaraxa waxaa uu usoo cararay halkii an joognay iyagoo isku dayaya inay ka baxaan goobta”.
Oliver Jones, 17 jir bandhig faneedkana kala qeyb galay walaashi ayaa yiri: ”dhawaqa qaraxa waxaa laga maqlay goobta oo dhan qof walbana wuxuu billaabay inuu baxsado”.
”Jahwareer ayaa jiray iyadoo dadka ay jihooyin kala duwan u cararayeen”, ayuu sii raaciyay Oliver.
Ilaa iyo hadda waxaan ognahay:
19 qof ayaa dhimatay 50 kalana way ku dhaawacantay qaraxa.
Qaraxa wuxuu ka dhacay saaxadda heesaha lagu tumo ee Manchester wax yar ka dib markii uu dhamaaday bandhig-faneed.
Qaraxa waxaa la sheegay inuu ka dhacay dibedda iyadoo dadka ay isku dayayeen inay baxaan.
Boolisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyay uu soo wacay 10.35 pm wakhtiga Manchester.
Waddooyiinka ayaa markiiba la xidhay.
Waxaa loo arkaa inuu yahay weerar argagixiso.
1.30 pm wakhtiga Manchester booliska ayaa qarxiyay wax ay uga shakiyeen inay ahayd bambaano.
‘Beenta & Boorabagaandadu intee beri ayey ku wadayaan’
“Golaha Wasiirrada Somaliland Waxa Uu Cambaaraynayaa Weerarka Siyaasadeed iyo Dhaqaale Ee Ka Soo Yeedhaya Soomaaliya”
Global Premium Smartphone TECNO Wins Africa Information Technology & Telecoms Awards (AITTA) Phone of the Year 2019
Badhasaabka gobolka Sanaag oo faahfaahiyey halka ay marayaan Wada-hadallo u socda Xukuumadda iyo Korneyl Caarre
Xukuumadda Somaliland oo Shaacisay Cidda Fasaxday Markab Xoolo Sidey oo Xannibnaa Dekedda Jiddah
Dahabshiil Group Oo lagu Majeertay Deeq Lacageed dhan $100,000 oo ku wareejiyey Dugsiga Farsamada Gacanta ee Berbera
Ugaas Maxamed Cumar oo si heersare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa
Mudaneyaasha Golaha Wakiillada oo dood dheer kaddib ku kala kacay Ansixinta Xeerka Ismaamulka Degmooyinka iyo Gobollada dalka
Waddan Islaam ah oo Haweenka u oggolaaday Inay Guursadaan Ragga aan Muslimiinta ahayn
Xalinta Khilaafaadka Isku-Dhaca Iyo Wada-Xaajoodka – Qaybta 1aad
SOMALILANDPOST Copyright: 2011 - 2019 SLpost News Corp. - All rights Reserved